बलात्कारविरुद्ध शून्य सहनशीलता | Nagarik News - Nepal Republic Media
२९ भाद्र २०७५ १४ मिनेट पाठ
छ–सात वर्षअघि कलेज अफ फिजिसियन्स एन्ड सर्जन्सको निम्तोमा परीक्षकका रूपमा कराँची पुगेका बेला सैनिक अस्पतालबाट आएका एकजना पाकिस्तानी ‘जर्साब’ सर्जनले मलाई बाहिर एक्लै नजाउ है, यहाँ त देख्दादेख्दै तिम्रो मोबाइल, वालेट खोसिदिन्छन् भनेका थिए। अझ उनी स्वयंले भोगेको अर्थात् उनी करिब करिब लुटिएको घटनाका बारेमा बताउँदा म केही छक्क पनि परेको थिएँ । मनमनै अलिअलि हाँसो पनि उठेको थियो– यो देशमा जर्सा’बहरूकै त यो हालत छ भने अरुको त झन् के होला ! दिनभरिको काम सकेर त्यहाँका सर्जन मित्रहरूसँग डिनरका बेला गफिँंदा म फूर्तिसाथ भनिरहेको थिएँ– ‘हामीकहाँ आयौ भने देख्नेछौ, भर्खरका किशोरी र युवतीहरू बिहान पाँच बजे नै पढ्न वा काम गर्न एक्लै हिँडेर वा स्कुटरमा गइरहेका हुन्छन्। राति दस बजे पनि त्यसैगरी एक्लै स्कुटर चढेर घर फर्किरहेका देख्नेछौ ।’ यसरी अप्रत्यक्षरूपमा ‘तिमीहरूको जत्तिको असुरक्षित छैन मेरो देश’ भन्ने सन्देश दिइरहँदा मनमा एक किसिमको सन्तुष्टिबोध भइरहेको थियो।
त्यसको केही वर्षपछि दिल्लीमा भएको बलात्कार, हिंसाको नृशंस घटनाबारे पढ्दा, सुन्दा ‘कस्तो देश हो त्यो, कस्ता मानिस!’ भन्ने लागेको थियो । सीमाबाहिरसमेत मनपरि आफ्नो चुरिफुरी र शक्ति देखाउने त्यो देश किन आफ्नै राजधानीमा यो सब हुँदा पनि यति अक्षम देखिएको होला भनी सोंच्दै गर्दा हिन्दी फिल्ममा देखिने गुण्डाराजका अनेक दृश्य मनमा आएका थिए। ‘त्यतिबिघ्न असुरक्षित त छैन कि मेरो देश?’ भन्ने पनि लागेको हो त्यसबेला। तर यतिबेला भने मेरै देशमा, आफ्नै देशमा, हरेक दिनजसो ‘बलात्कारपछि हत्या’ शीर्षकमा समाचार हेरिरहनुपरेको छ । जबजब दूधे बालिकादेखि असी–नब्बेका वृद्धासम्म बलात्कृत भएको, मारिएको सुन्नुपर्छ, दुःख, लाज, हीनताबोध, निराशा, आक्रोश र अरु पनि भएभरका क्लेसको घना बादलले मन ढाक्छ। सबैतिर अन्धकार देखिन्छ । समाचारका हरेक अक्षरसँगै आफू पटक पटक मरिरहेको अनुभूति हुन्छ । हरे, यो के भइरहेको हो मेरो यो देशमा?
जबजब दूधे बालिकादेखि असी–नब्बेका वृद्धासम्म बलात्कृत भएको, मारिएको सुन्नुपर्छ, दुःख, लाज, हीनताबोध, निराशा, आक्रोश र अरु पनि भएभरका क्लेसको घना बादलले मन ढाक्छ।
बलात्कार किन हुन्छ र यसलाई कसरी रोक्ने भन्ने प्रश्नको उत्तर शायद संसारभरका मानिस खोजिरहेका छन् । कानुन, सुरक्षा, शिक्षा, मनोविज्ञान आदि हरेक क्षेत्रबाट यो अपराध रोक्ने प्रयत्न पनि संसारभर नै भइरहेको होला। कहीँ केही बढी सफलता मिलेको होला, कहीँ कम । यो लडाइँमा मानवसमाजको पूर्ण विजय शायद अझै केही टाढै होला। तर यस्तो लामो यात्रामा जहिले पनि बढी हतारो हुने त जसलाई दुःखेको छ, उसैलाई हो। हामी नेपालीलाई यतिबेला बढी दुःखेको छ यतिबेला। त्यसैले बलात्कारको मनोविज्ञानका बारेमा संसारभरअनेक अध्ययन, अन्वेषण भइरहोस्, हामी पनि गर्दै गरौँ तर तत्कालका निम्ति भने हामीकहाँ बलात्कारविरुद्ध शून्य सहनशीलता स्थापित हुनैपर्छ। सबैलाई सुरक्षाबोध गराउन राज्य, कानुन, अदालत र सुरक्षा निकाय सक्षम हुनैपर्छ। र, यो तत्काल हुनुपर्छ।
हो, अरु कतिपय देशका तुलनामा हाम्रा निम्ति शायद अझै कठिन होला यो युद्ध। किनकि हामीकहाँ बलात्कारबारे प्रशस्त भ्रमपूर्ण धारणा समाजमा रहिआएका छन् । केही वर्षअघि एकजना (भूतपूर्व हुन् क्यारे) न्यायाधीशको अभिव्यक्ति कतै पढेको थिएँ। आपत्तिजनक, निराधार, अवैज्ञानिक र अल्पबुद्धिमा आधारित थियो त्यो अभिव्यक्ति । उनको भनाइ थियो– ‘महिलाको मन्जुरीबिना करणी हुनै सक्दैन !’ बलात्कारीलगायत आपराधिक प्रवृत्तिका मानिसको असामान्य मनोविज्ञान र त्यस्तो मनोविज्ञानले सिर्जना गर्ने शारीरिक स्थितिका बारेमा केही थाहा नपाएका मानिस कसरी लामो समयसम्म न्यायाधीश भए होलान् र यस्तो संवेदनशील विषयमा ‘न्याय सम्पादन’ गरे होला ? अझै पनि त्यस्तै न्यायाधीशले कतै काम गरिरहेका होलान् कि नहोलान् ? यो प्रश्न आफैँमा भयाबह छ।
बलात्कार बढ्नुमा महिलाले लगाउने छोटो लुगाको दोष देख्ने नीतिशास्त्रीहरूको त अझै पनि कमी छैन। तर महिला शिरदेखि पाउसम्म कालो लुगाले छोपिइने देशमा पनि बलात्कार हुन्छन् भन्ने कुरा यिनलाई थाहा नभएको होला र? गर्मीका बेला कट्टु र गन्जीमात्र लगाएर पुरुष, महिला, बालक, युवा, वृद्धवृद्धा सबै सडकमा पंखा हम्किंँदै हिंँड्ने देशमा उनीहरूको पहिरनले कुनै उत्तेजना सिर्जना गर्दैन र हिउँदमा गम्लङ्ग बाक्ला लुगा लगाएर हिंँड्ने मानिसका बीच पनि रतिराग उत्पन्न हुनसक्छ भन्ने कुरा पनि यिनलाई थाहा नभएकै होला त? यस्ता अभिव्यक्ति वा विश्वासले जहिले पनि कुनै न कुनै रूपमा बलात्कारीलाई उन्मुक्ति दिने र बलात्कृतलाई नै उल्टो दोषी देखाउन सहयोग पु-याइरहेको हुन्छ।
तत्कालका निम्ति भने हामीकहाँ बलात्कारविरुद्ध शून्य सहनशीलता स्थापित हुनैपर्छ। सबैलाई सुरक्षाबोध गराउन राज्य, कानुन, अदालत र सुरक्षा निकाय सक्षम हुनैपर्छ।
अझ पुरुषप्रभुत्ववादी र नारीद्वेषको मनोवृत्तिका कारण कतिपय किशोरका बीचमा केटीहरूले ‘नाईं नाईं’ गरेको अर्थ ‘हुन्छ’ भनेको हो’ भन्ने जस्ता वाहियात, बेबकुफीपूर्ण, नारी विरोधी र आपराधिक धारणाहरूको निर्वाध प्रसार भइरहेको छ। महिलाको नम्रता, मुस्कान, शिष्ट व्यवहारलाई समेत कुनै कुनै बेला ‘यौन निमन्त्रणा’ का रूपमा अर्थ लगाउने असभ्य मानिस पनि छन् । यस्ता गलत सूचनाले कलिलो उमेरदेखि नै कतिपय किशोरका सोंच प्रदूषित र विषाक्त बनेका हुनसक्छन् । त्यसमाथि सामाजिक सञ्जाललगायत इन्टरनेटका अनेक कुनामा यौन मनोविज्ञानबारे गलत सूचना दिने सामग्रीहरूको बाहुल्यले गर्दा यौनबारे गलत धारणावीजारोपण गर्ने र त्यस्ता हानिकारक धारणालाई मलजल गर्ने काम भइरहेको हुनसक्छ। यौनलाई जीवनको प्राकृतिक र सुन्दर आयामका रूपमा नभई शक्ति, हैकम, ‘पौरुषता’ प्रदर्शन गर्ने साधनका रूपमा व्याख्या गर्ने वा यति महŒवपूर्ण विषयलाई सस्तो र फोहोरीरूपमा प्रस्तुत गर्ने हानिकारक प्रवृत्तिले पनि कुनै न कुनै रूपमा बलात्कारलाई सामान्य घटना वा सानोतिनो अपराधका श्रेणीमा राख्न सहयोग पुगेको हुनसक्छ।
बलात्कार र यसको नियन्त्रणका विषयमा हरेक कोणबाट गहन अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता निश्चय नै छ तर यो कामसंँगै यस्तो जघन्य अपराध रोक्नका निम्ति तत्कालै केही सार्थक उपाय नगरी हुन्न। हरेक दिनका पत्रिका पढ्दा वा समाचार सुन्दा अहिले देशमा बलात्कारका घटनाले एउटा डरलाग्दो आपतकालीन स्थितिसिर्जना गरिसकेको आभास हुन्छ। के कुरामा द्विविधा हुनुहुँदैन भने यसलाई केवल कुण्ठाजन्य यौन हिंसाका रूपमा मात्र हेर्नु गलत हो । बलात्कार गम्भीर अपराध हो जो दण्डनीय नै हुनुपर्छ र दण्ड कठोर नै हुनुपर्छ। जब बलात्कारसँंगै हत्यासमेत हुन्छ, त्यो त झनै कठोर, दण्डनीय, अमानवीय अपराध नै हो जसका निम्ति मृत्युदण्डमात्रै पनि हलुका प्रतीत हुन्छ।
गम्भीर अपराधीहरूप्रति कस्तो व्यवहार गर्ने भन्ने कुरा त्यसको प्रयोजनले निर्णय गर्छ। बारम्बार अपराध गरिरहने अपराधीलाई केही विद्वान्ले रोगीको श्रेणीमा राख्ने गरेका पनि छन्। ती साँच्चै नै मनोरोगी हुन पनि सक्छन्। रोगी नै मान्ने हो भने पनि त्यस्ता अपराधी वा ‘रोगी’बाट समाजलाई कति खतरा छ भन्ने कुराका आधारमा ऊमाथिको व्यवहार निर्देशित हुनुपर्ने हुन्छ। बलात्कार र हत्या गर्ने मानिस मानसिक रोगी नै रहेछ भने पनि उसको ‘उपचार’ नै सम्भव छ भने पनि, त्यो निहुँमा दण्डहीनताले स्वीकृति पाउनुहुँदैन । अरुको सुरक्षाका निम्ति, समाजमा सुरक्षाबोधका निम्ति ऊ कठोररूपमा दण्डित हुनैपर्छ। दण्डनीयता आफैँ नै यस्ताका निम्ति सार्थक ‘उपचार’ समेत बन्न सक्छ।
दण्डविहीनता अन्त्यसँगै अब सबै तहका, सबै विषयका औपचारिक अनौपचारिक शिक्षामा कसरी सामाजिक उत्तरदायित्व बोकेको सभ्य नागरिक बन्ने भन्ने विषयले प्रवेश नपाई हुँदैन। संसारका विभिन्न देशमा क्रियाशील अध्येताहरूका सबै अन्वेषणले एउटै कुरा बताइरहेका छन्– सामाजिक उत्तरदायित्वबोध भएका मानिसबाट अपराध हुने सम्भावना कम हुन्छ। वेन स्टेट युनिभर्सिटीकी मनोविद् एन्टोनिया आब्बेले बलात्कारीहरूकै अध्ययन गर्दासमेत पाएकी थिइन्– पश्चातापको भाव भएकाहरूले अपराध दोहो-याउने गर्दैनन्।
हरेक दृष्टिले पछौटेपनमा डुबेको अवस्थामा सामाजिक न्यायका विषयमा गम्भीर नभई आँखा चिम्लेर भौतिक समृद्धिको कुरामात्रै गरिरहँदा जुन संवेदनविहीनताले ठाउँ पाउँछ, त्यो संवेदनविहीनताको स्थितिमा असल नागरिक हुर्काउन गाह्रो हुन्छ। यस्तो अवस्थामा बलात्कार जस्ता जघन्य अपराध मौलाउने खतरा अझै बढ्ने डर हुन्छ। जबकि असल नागरिक हुर्काउन नभई नहुने सर्त हो– सामाजिक न्याय।
आशा गरौँ, राज्य यी सबै विषयमा सचेत हुँदै जाला तर अहिले नै धेरै नै ढीलो भइसक्यो– जनताले प्रत्यक्ष अनुभूत गर्नेगरी बलात्कारविरुद्ध शून्य सहनशीलता तत्काल स्थापित गरोस् राज्यले । सुरक्षा निकायप्रति बढिरहेको अविश्वास अन्त्य हुने स्थितिसिर्जना गरोस् । जनताको यो आग्रह आक्रोशमा बिष्फोट हुने स्थिति नआओस्।
प्रकाशित: २९ भाद्र २०७५ ०९:०४ शुक्रबार